Abathandi Kuzonyuka eside ezindaweni akude impucuko, cishe uyazi inkinga yokungabi amanzi okuphuza. Carry nalo adingekayo wekhasi ngiyaphupha. A amanzi okuphuza kusuka ezenzeka imithombo yingozi. Ngakho-ke izihambi abanolwazi sebenzisa kungase kutholakale izindlela yamanzi nokuhlanzwa. Ukuze lokhu banezela amathuluzi yakhe ekhethekile, ubilise ke, badabula siqu ekhiqizwa noma ezikhiqizwa emanzini isihlungi ekamu endaweni yokukhanda.
Hlobo luni amanzi okuphuza emkhankasweni?
Nokho, uma ehamba endaweni enezintaba ocebile crystal ukusakaza ecacile neziphethu. Kodwa kwenzekani uma umkhankaso Kwenziwa yini endaweni Isizalo ihlanzekile? Into yokuqala ukuze ufunde - ukuthi amanzi okuphuza kufanele kuthathwe hhayi emthonjeni wokuqala etholakalayo endleleni. Inketho engcono - okungenxa phansi. Kodwa, ngeshwa, lezi iziphethu awavamile. Uma bengekho, kufanele ukhethe umthombo wamanzi ukuthi itholakala ekhoneni olunothile nemvelo.
Uma emhlabeni imvelo ukuqhakaza - ungakwazi zinezimoto ukuhoxa. Uma uyayazisa impilo yakho, uketshezi nge kunuka kabi nombala uthole round. Akubalulekile ukusebenzisa amanzi akhiwe emthonjeni, sizungezwe oluhlaza lantambama, izinhlaka zamathambo kwezilwane lapho eduze yimuphi isitshalo noma indawo. Njengoba lisetshenziswe uketshezi ezinjalo ngaphandle kokwelashwa, wena engozini ukuqeda umkhankaso wakhe ngaphambi kwesikhathi.
Indlela ukuhlanza amanzi emkhankasweni
Mayelana nodaba amanzi okuphuza kufanele banakekele kusengaphambili, ngisho nangaphambi kokuba inqume ukuba hit umgwaqo. Hlola ibalazwe lendawo lapho nawe kuyosishukumisela. Thola imithombo lapho ungakwazi geza uthole amanzi okuphuza. Cabangela izindlela wokuhlanza tack amanye izinto kungadingeka ukwenza ekamu isihlungi amanzi kuphela.
A option omkhulu esisindisa abahambi eziningi - production umgwaqo Elihehayo endaweni yokukhanda. Uma uthatha nawe, wena cishe akudingeki ezikudidayo phezu lapho ukuthatha amanzi alungele ukuphuzwa. Izihlungi izimo mkhakha ekhiqizwa ezinezici ezifana nokusebenza kwabo kwaba elula kunazo kulesi simo. A indawo ekhethekile ukuphila izivakashi uthatha izihambi (noma ekamu) ukuhlunga "Aquaphor Universal". Kuchazwa kanjani-ke ithandwa kangaka?
"Aquaphor Universal" - Assistant izivakashi nezakhamuzi ehlobo
ikamu isihlungi Water "Aquaphor Universal" empeleni akukhona nje wokuhlanza uketshezi ethathwe emithonjeni evulekile. Amemezela ngentshiseko zisebenzisa amaholide noma abanikazi Cottages zwe, lapho kungekho khona amanzi supply emaphakathi. Amandla aso iwukudambisa chlorine libuye lithi nomkhiqizi kusikisela ukuthi idivaysi yakho ngeke asetshenziselwe ukuhlanzwa sokuphuza amanzi empompini.
Nge lesi sihlungi emanzini, kungakhathaliseki ukuthi isimo sokuqala njengoba kunjalo, kungaba cishe 100% ukuhlukana of ukungcola, njenge:
imithi yokubulala izinambuzane;
Ukusebenzisa isihlungi "Aquaphor Universal" izimo mkhakha
Yokuhamba ngezinyawo Water Hlunga "Aquaphor Universal" kuyinto icwecwe kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa. Inesisindo 400 amagremu, unamahlangothi 65h90 mm. Zingahlanza-300 amalitha amanzi kusuka emithonjeni evulekile. Ngomzuzu usebenzisa kungenzeka ukuthola 300 ml amanzi okuphuza. Ngakho, eyodwa kuphela isihlungi ikhanda neqembu ngokwanele lonke zezivakashi.
Hlunga "Aquaphor Universal" has a imbobo ngoba ukunamathela isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, futhi ngumuntu umlomo wombhobho ekhethekile kungenziwa awananyatheliswe ibhodlela plastic, okuyinto esiwusizo kakhulu ngokuya mkhankaso. Kodwa kubalulekile ukuba acabangele ehilelekile esisodwa esibalulekile. Amanzi adonswa ngaphansi evulekile imithombo yemvelo, ngaphambi ukudlula wena ngokusebenzisa le lemifanekiso, kubalulekile ukuba ubilise. It kuphela libonisa ukuthi akubona bonke-100% izilokazane ezincane ezihlala kulo, ongaqeda wezindlu, futhi ingozi yokutheleleka, nakuba ongatheni, kodwa kukhona.
Abilayo - indlela yokuqala amanzi magciwane
abahambi abanolwazi bayazi ukuthi kukhona izindlela ezimbalwa zokukhipha igciwane amanzi kusuka imithombo yemvelo, uma amanzi ekamu isihlungi nganoma yisiphi isizathu ayitholakali. Ngokuvamile ulisebenzise ubilise. Kodwa kubalulekile ukuba umane ukulinda kuze kube amanzi uqala ubilise ngamandla, kodwa uyibambe kulesi sifundazwe imizuzu okungenani 10, okungcono 20 noma ngisho 30.
Ukuze umphumela engcono emanzini abilayo kufanele wanezela zonke amagatsha amancane isihlahla coniferous. Kungasetshenziswa le njongo emagxolweni oki, beech, willow, ukhuni noma ziyadliwa, kanye amagxolo abasha. Suit futhi beze ngaphansi kwesandla amakhambi: calendula, arnica, tumbleweed, uphaphe utshani, ikamela ameva, Yarrow, violet ensimini. Zonke izingxenye kufanele engezwe nenani elilodwa noma amabili izinkomishi ibhakede lamanzi ngesikhathi abilayo noma uma esuswa ukushisa ngoba bemi amahora 6.
Indlela ukuqeda amanzi kwegciwane umkhankaso
Ukungeza amaphilisi. Lena akuyona indlela engcono kakhulu zokukhipha igciwane amanzi, kodwa yizici zamakhemikhali kusenzima hhayi kulimaza njengokungenisa ingase akusho iphathwa uketshezi emfuleni. Ngenxa yale njongo, izindlela ezinjalo ingasetshenziswa: pantotsid, akvasept, klorsept, gidrohlonazon. Nge nje iphilisi elilodwa yanoma yiziphi izidakamizwa ezihlongozwayo ngemizuzu engu-20 zokukhipha igciwane a pint yamanzi.
Potassium permanganate. A ibhakede ke kufanele kuqashelwe ingcosana 1-2 g Qinisekisa ukuthi isixazululo akuwona umbala ayegcwele, noma angathengwa emkhankasweni amagciwane engadingeki overgrowth.
Salt. Ukungeza elilodwa noma amabili amalitha isipuni sikasawoti ayikwazi decontaminated amanzi angcolile kakhulu. Kodwa khumbula, ukusetshenziswa njalo kwakhiwa kungaholela amanzi emzimbeni.
Mechanical nokuhlanzwa kwamanzi emkhankasweni
Uma akhiqizwa umkhankaso amanzi turbid kakhulu futhi has a ukungcola elikhulu, kungenzeka ukwakha amanzi ekamu okukuhlunga ezandleni zakho. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona:
Kusukela ezinhlayiyeni elikhulu inhlabathi, isihlabathi, kuzosiza balahle iyiphi eligoqiwe izingqimba eziningana lendwangu. Ungathatha ngebhandeshi noma amasokisi ahlanzekile.
Phakathi eside yokupaka umane ukuvikela amanzi e emiphongolweni emikhulu noma flasks. Ngaphansi kwethonya kwelanga nezinto ezincane eziphilayo therein ayafa.
Enye indlela ukuthola amanzi oluhlanzekile ucishe - wasiqashisa seep ngokusebenzisa phansi. Ukuze wenze lokhu, umbe ngaso umgodi ekhoneni ichibi bese ulinda emanzini ukuze nabezhit.
Ungenza hlobo uvolo ntambo bese uphonsa izophela ithangi lamanzi futhi ngaphandle kwalo. AbaseGibithe bayakunengwa ngukuphuza amanzi kancane zigcwale.
Futhi, izivakashi ngokuvamile self-ezenziwe amanzi isihlungi e izimo emkhakheni izinduku ezintathu, indwangu, utshani, isihlabathi esihle namalahle. Sezinsaba ukusetha tripod, okuyinto uboshelwe Indwangu okuqukethwe esohlwini. Ngemva kokudabula utshani, isihlabathi futhi amalahle, amanzi kucacile.
Enye indlela yokwenza ukuhlunga amanzi ekamu - ukukwenza kusukela ithini isihlabathi. Ukuze wenze lokhu, amathini okusemathinini ukwenza izimbobo ezincane ezimbalwa, ezibekwe phezu indwangu noma izingqimba eziningana cheesecloth wathela isihlabathi esishisayo. Hlunga ngomumo. Manje kufanele ugcwalise ngemadlana encane yamanzi ulindele zize ziqhuma kusukela izimbobo. Kunalokho, amabhange ngokuvamile zisebenzisa ibhodlela plastic.
Ukuthuthukiswa izinga amanzi izimo mkhakha
Amanzi kuyoba wezindlu kancane futhi tastier uma kukho iwayini elincane. Uma ebabayo liquid ine iphunga ezingemnandi, ungakwazi ukuvikela amahora amaningana ne namalahle othathwe umlilo. Ngezinye izikhathi amanzi abilayo aphonswe izingcezu zobumba noma uvolo. Khona-ke, ukuthatha out, ngawakhamela.
amajikijolo hawthorn uthuthukise ukunambitheka kwamanzi usawoti. Enye indlela yokuthola amanzi esihlwabusayo - mix it ne inhlabathi ehlanzekile ukunikeza ukuma okuhle. Lolu ketshezi ngeke ngcono ikhwalithi kanye ukunambitheka, uma ukuvikela ngayo amaqabunga ambalwa kukhiwa esihlahleni nobe lomisiwe we lukagamthilini.
The elula nephephile indlela ukuhlanza amanzi ebhuqwini amagciwane - iwukuba balidlulisele efektri lemifanekiso, isibonelo, "Aquaphor Universal". Kodwa uma lolu hlobo isihlungi ekamu amanzi ayitholakali, ungasebenzisa izindlela ngakwesokunene ukwenziwa yayo futhi usebenzise eyodwa yezindlela of magciwane. Ngakho, lokulondoloza amanzi kusukela ukungcola kanye nezilwanyana ezincane eziyingozi, uthola ngempela ephephile sokuphuza ketshezi. Futhi ukuthatha iseluleko ekuthuthukiseni izinga layo kanye ukunambitha, ungakwazi ngisho elithile ukujabulela inqubo eqeda ukoma.